Mampiasa ny Fanjakana Islamika mba hiresahana mikasika an’i Okraina Atsinanana ny fandrangitana sasany ao amin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Desambra 2019 18:42 GMT
Misy andian-dahatsary nivoaka tao amin'ny Vkontakte sy Youtube mampiseho milisin'i Okraina Atsinanana ao Donetsk sy Louhansk, nafangaro tamin'ny sarinà djihadistan'i El ao Siria sy mpiady avy ao Kaokazy Avaratr'i Rosia. Misy feon-kira ilay fangaron-dahatsary ary mifanakalo eo anivon'ireo tsikin'ny takbirs (fomba fiteny arabo hoe “Lehibe Andriamanitra!”) ny rehetra. Eo amin'ny zoron'ny lahatsary, voamariky ny sainam-pirenen'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Donetsk avokoa ireo lahatsary rehetra izay voarakotra kalachnikov roa mifampisalika sy shahada (Asa ao anatin'ny finoana Silamo”).
Misy vondrona Vkontakte natokana ho an'ny famoronana zavakanto sy sarinà saina ho an'ny “Fanjakana Islamika” ao Donbass mihitsy aza. Akaninà fandrangitana ilay vondrompiarahamonina, izay ahitàna votoaty tena adaladala mampihomehy. Afaka ahitàna sary novaina an'ilay kômandan'ny mpikomy teo aloha, Igor Strelkov, ôrtôdoksa votom-bavaka, nametahana volombava be, izay manome toky fa “hanadio ny Masina Donbass amin'ireo mpamadika” izy.
Tsy mankasitraka ny ezaka fivazivaziana ireo mpanohana rehetra ny mpikomy, toy ny lazain'ny fanehoankevitra sasany ao amin'ny YouTube:
Tamin'ny volana Septambra lasa teo, nitady porofon‘ny fandraisan'ireo mpiady Tsetsenina anjara tao amin'ny Donbass i Karena Avedissian avy ao amin'ny RuNet Echo, ary nanao tsoakevitra fa ambony ny tombana amin'ny fahamarinan'ireo tsaho.
Manana fanazavana ho an'ny “Fanjakana Islamikan'ny Donbass sy Lugant” ny mpampiasa aterineto mitoraka bilaogy ao amin'ny tltpravda.ru: